Tọzdee, Febụwarị 25, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Scott Hardigree
Anọ m na-akpọta nwa m nwanyị 9 dị nso ikpe ziri ezi, mgbere ahia umuaka. Site na mbido onye njikwa ahụ tụrụ m n'anya, na nkeji oge 5, yana ntinye ngwaahịa na nkwalite. Nke a gara n'ihu maka nkeji 30 ruo mgbe a manyere m ụlọ akwụkwọ ya na nghọta na mmasị ndị ahịa.
Mmemme email jọgburu onwe ya dị ka onye ahịa na-adịghị arụ ọrụ. Kama ịnwe ịgụ na enweghị mmasị na ihu nke ndị ahịa gị, nwee mmetụta na-adịghị mma na ire ahịa, ma ọ bụ na m, nụrụ okwu ike nke okwu ha; email email nwere ike ịgwa gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ịchọrọ ịma banyere ndị ahịa gị ma nyere gị aka ire karịa.
Na-agafe karịrị “Hi FNAME”
Ihe omuma a choro iji mee ka ihe omuma email gi karie uru di ugbua na aka aka gi ma odighi onu. Ọ na-abịakwute gị n'ụdị data. Achọghị m imeghe ma pịa data, agbanyeghị nke ahụ ga-agwa gị ọtụtụ ihe, ana m ekwu maka data ga-enye gị ohere ịme ahụmịhe maka ndị ahịa gị ọ bụla.
N’ezie, a na - anabatakarị mmadụ nke ọma ma m dịka m kwuru na Chief Marketer n’oge na - adịbeghị anya isiokwu, Valentpo outbọchị mgbasa ozi nke afọ a bụ ndị na-eji data miri emi, dị ka ịzụta akụkọ ihe mere eme na profaịlụ ndị ahịa, iji mee ka onyinye ha nwekwuo onwe ha ma nwekwuo mkpa. N'isiokwu ahụ, ana m ekwu ọtụtụ ihe gbasara ndị na-ere ahịa mana ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ nwere ọtụtụ data nwere ike ịnweta iji soro (ma ọ bụ ọbụna buo amụma) ebumnuche ịzụta nke ndị ahịa ha yana ịchọpụta ire ere na ire ere.
Gịnị Ka Have Ga-arụkọ Ọrụ?
Isi mmalite nke data na-arụ ọrụ dị ka ihe na-adịghị agwụ agwụ, mana nke a bụ edemede ole na ole na ihe atụ akọwapụtara:
Profaịlụ: Were ya na ị na-agba ndị ọrụ na-eme njem njem na abụ m afọ 65 y / o, ị chere na m ga-azaghachi nke ọma na onyinye nke gosipụtara ebe ndị okenye kachasị ewu ewu? Ugbu a were ya na onyonyo ndị a na-enye ha bụ ndị doro anya na-acha ọcha ọlaọcha. Ma ọ bụ ikekwe m nọ n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ na webinar gị bụ oge maka 1pm ọwụwa anyanwụ, m ga-enwe ike idobe oche m ma ọ bụrụ na email gụọ 11am pacific?
Historyzụ History: Ọ bụrụ na m zụtara onyinye na ma ọ bụ gburugburu ụbọchị taa, afọ abụọ n’usoro, enwere m ike ịzụta ọzọ ọzọ n’afọ a? Gịnị ma ọ bụrụ na onyinye onyinye ọhụrụ ahụ dị na nke mbụ m zụtara nke ndị ọzọ na-azụ ahịa onyinye? N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na azụọla m ngwa ahịa gị bụ isi, ị chere na m chọrọ ịnụ maka ego ole m gaara echekwa, ọ bụrụ na m ga-eche? Kama, agaghị m achọ ịma maka onyinye gị nke abụọ?
Ọrụ: Ma eleghị anya, m na ebudatara atọ n'usoro na-acha ọcha akwụkwọ na 30 ụbọchị, ma m na-ma na-eme ka a zụọ, ọ ga-abụ ezi echiche na-agba m ka a mkparịta ụka banyere m kpọmkwem mkpa? Ma ọ bụ ma eleghị anya, azabataghị m ihe ị na-enye gị n'oge ụfọdụ, m zuru oke maka ntinyeghachi ma ọ bụ nyocha afọ ojuju?
Mmasị: Were ya na ị nwere ngwaahịa 10 dị iche iche mana m bụ onye na-ere ahịa nke nwere naanị mmasị na ngwaahịa 1-5. Ekwesighi ka etinye m na ndị ọzọ resellers? Gịnị ma ọ bụrụ na abụ m onye ọrụ ọfụma mana naanị m chọrọ ịnata ozi mmụta, na-agbanyeghị nkwado, enwere m ike ịnwe ịnụ ọkụ n'obi ma kesaa ozi gị ma ọ bụrụ na m nweta ihe m chọrọ n'ezie?
Ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịme
Ọ na-eju m anya mgbe ndị ahịa SMB na-ekwu na iji data na ọkwa a bụ naanị maka ụmụ nwoke ukwu. Nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu na afọ ndị gara aga, mana taa ESP ọ bụla nke bara uru nnu ha na-ejikọ ngwa ngwa na CRM ma ọ bụ azụmaahịa E-commerce na weebụ nchịkọta. Ihe ikwesiri ime bu ichikota ya ma kachasiri nwaa ya.
Tags: Arụ ọrụemailozi emailemail nkeonwenhọrọ emailprofaịlụ emailemail zụọzụta akụkọ ihe mere eme
Scott Hardigree bụ CEO na Emlọ, ụlọ ọrụ na-ere ahịa email zuru oke na ndụmọdụ na Orlando, FL.
Scott nwere ike iru na scott@indiemark.com.
Kasịnụ Teknụzụ Ahịa Mgbe
Mar 19, 2010 na 1: 14 PM
Mba, ọ dịghị mfe ma dị ọnụ ala itinye ihe n'ahịa ịzụrụ wdg na email ahịa mmemme. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ESP niile na-arụ ọrụ onwe ha anaghị enye ọbụna iota nke njikọta. Ọ bụ ọrụ POS ngwa ma ọ bụ ngwa dị n'ịntanetị mgbe niile ijikọ na ịkwanye ozi “nkewa” dabara na kọntaktị ESP.
SMB chọrọ ihe dị mfe yana ọrụ onwe ya.